O.I.C. ကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ရမလဲ | Freedom News Group
O.I.C. ကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ရမလဲ
by FNG on October 15, 2012	by Ven Ravika ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ဗမာအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း အသက်ရှည်ပါစေလို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သလို အခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာလည်း ရခိုင်အဓိကရုဏ်းတစ်ခု နည်းတူဖန်တီးပြီး သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် အသက်ရှည်ပါစေလို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြပြန်တယ်။ တရုတ်ဗမာအရေးအခင်းတုန်းက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရုတ်အသင်းမရှိခဲ့။ အခု ရခိုင်အရေးအခင်းမှာ O.I.C. အဖွဲ့ကြီး ရှိနေတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ကျးမြီးဆွဲမိပြီ။
U.N.H.R.C. Resolution 16/18
အိုစမာဘင်လာဒင်ကို ဘယ်မူစလင်နိုင်ငံက ရှုတ်ချဖူးသလဲ။ မရှိပါ။ O.I.C.လည်း သူ့ကို ရှုတ်ချဖူးသလား။ မရှိပါ။ WTC အတိုက်ခံရတော့ O.I.C.က ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ။ Islamophobia မူစလင်မုန်းတီးရေးမလုပ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂကို သွားပြီး ဖိအားပေးခဲ့တယ်။ မူစလင်တွေအပေါ် ဘာသာခြားတို့ရဲ့ သည်းခံနိုင်ခြင်းမရှိမှု (Religious Intolerance)၊ အစ္စလာမ်ကို စော်ကားတယ့် အပြုအမူ(Blasphemy against Islam)တွေကို ပိတ်ပင်ပေးဖို့ U.N. မှာ လုံးပမ်းနေခဲ့တယ်။ U.N.H.R.C. Resolution 16/18 အရ စကားလုံးအနည်းငယ် ပြင်ဆင်ပြီး O.I.C. တောင်းဆိုသလို အတည်ပြုပေးခဲ့ရတယ်။
လေ့လာကြည့်ပါ။ ဒီအဆိုကို တင်သွင်းတယ့် O.I.C.အဖွဲ့ဟာ ဆော်ဒီအရေဗီးယားနိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်တယ်။ ဆော်ဒီအရေးဗီးယားနိုင်ငံဟာ ဘာသာရေးအရ ခန္တီတရား လုံးဝမထားရှိကြောင်း ကမ္ဘာသိဖြစ်တယ်။ ဆော်ဒီအရေးဗီးယားကျောင်းမှာ သင်တယ့်စာကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ဂျူးများဟာ ရွံစရာကောင်းကြောင်း၊ မူစလင်များဟာ မြင့်မြတ်ကြောင်း ရေးထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဂျူးများကို ပြည်ဝင်ခွင့်လုံးဝမပေးသလို ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ အစရှိတယ့်ဘာသာရေးပစ္စည်းများကိုလည်း သယ်ဆောင်ခွင့်မပေးပါ။ မူစလင်မဟုတ်ယင် စုရုံးခွင့် မပေးသလောက်ပါပဲ။ U.N.က ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်လုံးဝမရှိတယ့် ဒီလိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကနေ ဦးစီးပြီး တင်သွင်းလာတယ့်အဆိုကို ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုပေးခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီ Resolution ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပေမယ့် အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဆော်ဒီက အခုထိ လိုက်နာခြင်းမရှိပါ။ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် မခွဲခြားဖို့၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ပေးဖို့၊ ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု လိုက်စားတာကို အားပေးဖို့၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတစ်ခုခု ဘာသာရေးအဆောက်အဦးတစ်ခုခုကို ဖျက်ဆီးယင် ဆန့်ကျင်ဖို့၊ ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု အမြင်ချင်းဖလှယ်ပြီး အချင်းချင်းသည်းခံနိုင်ဖို့ အစရှိသည် ပါပါတယ်။ ဆော်ဒီ၊ အီရန်တို့လို အစ္စလမ္မစ်နိုင်ငံတွေဟာ ဒီမိုကရေစီကို ရန်သူသဖွယ် သဘောထားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ ရောက်ရှိနေတယ့် မူစလင်များကိုတော့ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့အညီ ဆက်ဆံဖို့ သူတို့ကပဲ ဆော်အောကြပြန်တယ်။
O.I.C. အနေနဲ့ မူစလင်ဘာသာဝင်တွေ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတယ်လို့ နိုင်ငံတကာမှာ အော်လေ့ရှိကြတယ်။ ဥပမာတစ်ခု ပြပါရစေ။ တစ်ခါမှာ ဘာသာပေါင်းစုံအစည်းအဝေးတစ်ခု လုပ်ပါတယ်။ Peace Walk တစ်ခု လုပ်ဖို့ပါ။ ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာလဲ မပြောပါရစေနဲ့။ ဘာသာတိုင်းက အကြံပြုကြရာ စာရေးသူက ရေဟာ ဘာသာတိုင်းမှာ မြင့်မြတ်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ညီညွတ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ခရစ်ယာန်မှာ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ၊ ဟိန္ဒူမှာ စင်ကြယ်ခြင်း၊ အစ္စလာမ်မှာ အသက် အစရှိသည်ဖြင့် အသီးသီးရှိပါတယ်။ ဘာသာတိုင်းက ရေအိုးယူလာကြပြီး ညီညွတ်ခြင်းသင်္ကေတ၊ ပေါင်းစည်းခြင်းသင်္ကေတအဖြစ်နဲ့ မြစ်ထဲသို့ ရေကို သွန်ချကြပါစို့လားလို့ အကြံပေးပါတယ်။ ဘာသာတိုင်းလိုလိုက သဘောကျနှစ်ခြိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆရာက သူ့ရေကို အခြားဘာသာများရဲ့ ရေနဲ့ အရောမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ ဒီအစီအစဉ် ပျက်သွားရပါတယ်။ မိမိတို့ရောက်ရှိရာနိုင်ငံ၊ ဒေသ၊ လူမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံများနဲ့ လိုက်လျော်ညီထွေ မနေနိုင်တာက ဘယ်သူလဲ ရှင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက ခွဲခြားတာလား၊ ကိုယ့်ကပဲ အထီးကျန်နေလားဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စပါပဲ။ ဒါကို O.I.C. က ပိုသိပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်ကို O.I.C. ဘာလာလုပ်သလဲ
O.I.C.ဟာ မြန်မာမူစလင်များကို ရိုဟင်ဂျာဖြစ်အောင် မွေးဖွားပေးသူ ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ဂျူးများကို စုစည်းပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံကို အနောက်နိုင်ငံများ ထူထောင်ပေးသလို သူတို့အဆို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားနဲ့ တတိယနိုင်ငံရောက်မြန်မာမူစလင်များကို စုစည်းပြီး တစ်နေ့ကျယင် အန္တိမရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံတစ်ခုကို ရခိုင်မှာ ထူထောင်ပေးဖို့ပါပဲ။ O.I.C. အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကိုယ်တိုင်ကလည်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့ပဲ လာတာမဟုတ်၊ ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့လည်း ပါတယ်လို့ ပြောပြီးသားပါ။ မလေးရှားကနေ ပို့တယ့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းမှာလည်း အပြင်ဘက်တစ်ထပ်မှာ ရခိုင်လို့ ရေးပြီး အတွင်းဘက်မှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ပါနေတာကိုပဲ ကြည့်ပါ။ O.I.C.က ဒီအပတ်မှာပဲ ဖိလစ်ပိုင်မှာ မိုရိုတော်လှန်ရေး အောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ O.I.C. ဘာလာလုပ်တာလဲ ရှင်းပါတယ်။
သိန်းစိန်အစိုးရက ဘာကြောင့် O.I.C.ကို လက်ခံခဲ့လဲ
သူတို့ဟာ ဆန္ဒပြနေတယ့် သံဃာတော်များထက် ပိုပြီး organized ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံ စုပေါင်းပြီး အကွက်ကျကျ လှုပ်ရှားလေ့ရှိပါတယ်။ ဆော်ဒီအရေဗီယားက တစ်နည်းလှုပ်ရှားမယ်၊ ဆော်ဒီအရေဗီယားက လူရာမတိုးနိုင်တော့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများကို ထိုးဖောက်ဖို့ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် တူရကီကို အသုံးချမယ်၊ မြန်မာကို အကြပ်ကိုင်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မလေးရှားကို အသုံးချမယ်။ အဖွဲ့ဝင်မဲ (၅၇)မဲကို ကိုင်ပြီး ကုလသမဂ္ဂကို အကြပ်ကိုင်မယ်။ သူတို့က ဒီလို သွားလေ့ ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်ကို လာချင်တော့ ဘီဘီစီအပါအဝင် သတင်းဌာနတွေကနေ ဝါဒအရင်ဖြန့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရခိုင်မှာ မုဒိမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကုတ်မှာ လူသတ်မှုဖြစ်တယ်။ မောင်တောမှာ မီးရှို့မှု စဖြစ်တယ်။ စစ်တွေကို ကူးစက်တယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သတ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးတယ်။ မနေ့တစ်နေ့က ဗုဒ္ဓဂယာ၊ ဒေလီ၊ မွမ်ဘိုင်းကို ဗုံးခွဲဖို့ ကြံတယ့် မူစလင်(၃)ယောက် မိတယ်။ ဒါတွေက O.I.C. အကြိုက်တွေပါ။ ပြဿနာဖြစ်မှ ဝင်လို့လွယ်မှာကိုး။
သိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ O.I.C.ကို သဘောကျမယ်လို့ မထင်ပါ။ အစက ကြံရာပါလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ဆော့ချင်လို့ ဒီအဓိကရုဏ်းကို လွှတ်ထားခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာရဲ့အတိမ်အနက်ကို လျှော့တွက်မိခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်တကယ်မှာ ဒီပြဿနာဟာ မသေးလှပါဘူး။ အစိုးရကလည်း နာမည်ကောင်းယူနေတယ့်အချိန်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့လည်း အငြိုအငြင်မခံချင်တယ့်အချိန်၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ရှောင်ရှားချင်တယ့်အချိန်၊ နိုင်ငံရေးအရလည်း အာရုံလွှဲဖို့ လိုအပ်နေချိန်မို့ O.I.C.ကို လက်ခံရတော့မှာပါ။ သံဃာတော်များ၊ ပြည်သူပြည်သားများက ဆန္ဒဘယ်လောက်ပဲပြပြ အစိုးရအနေနဲ့ O.I.C.ကို ယာယီမျှလောက်တော့ လက်ခံထားရမှာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
WTC ပြိုကျသွားတာတောင် မမှုတယ့် O.I.C. ပါ။ လန်ဒန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကိုလည်း စိတ်မဝင်စားတယ့် O.I.C ပါ။ O.I.C. အနေနဲ့ ဆော်ဒီအရေဗီယားလို အပြာနုရောင်အစ္စလာမ်တိုင်းပြည်များမှာ ဒီမိုကရေစီအကြောင်း လုံးဝမပြော၊ မူစလင်လူနည်းစု အဝါနုရောင်ဘာသာခြားနိုင်ငံများမှာ ဒီမိုကရေစီအကြောင်း၊ ခန္တီတရားအကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း အသားပေးဟောပြောပြီး အစ္စလာမ်ပြန့်ပွားရေး လုပ်လျှက် ရှိတယ်။ အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ့် မျက်နှာနှစ်ဖက်ပိုင်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ကျားမြီးကို ဆွဲမိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရှေ့ဆက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ O.I.C. ကို သံတမန်နည်းအရ ရင်ဆိုင်ဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ထေရဝါဒနဲ့ညီမညီ နောက်မှ ဝေဖန်ပါ။
၁။ သင်တန်းပေးပါ။ ဆန္ဒပြတယ့် သံဃာတော်များ မနည်းလှပါ။ ဒီသံဃာတော်များကို O.I.C.အကြောင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာအကြောင်း၊ ရှရီယာဥပဒေအကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ဝင်ခွင့်ဥပဒေအကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေအကြောင်း သင်တန်းပို့ချပါ။ မုန်းတီးရေးသင်တန်းမဟုတ်ဘဲ ပြဿနာကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်တတ်အောင် လမ်းညွန်ပေးတယ့်သင်တန်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
၂။ သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပါ။ ဆန္ဒလည်း ပြပါ။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းလည်း လုပ်ပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားပြီး ရခိုင်လူမျိုးများကိုသာမဟုတ်ဘဲ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများကိုလည်း ကူညီပါ။ နိုင်ငံသားလား၊ တရားမဝင်ကျူးကျော်သူလား မပိုင်းခြားဘဲ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ပါ။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်နိုင်ဖို့ O.I.C.အကူအညီ မလိုအပ်ကြောင်း ပြသစေချင်တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂတွေ ဖွဲ့စည်းပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖို့ အလှူခံထွက်ကြဖို့ပါပဲ။
၃။ ကြားခံထားပါ။ အစိုးရဟာ O.I.C. ကို ရခိုင်နဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့လက်ထဲမှာပဲ ထားခဲ့လို့ ရပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများကို ရိုဟင်ဂျာလို့ မခေါ်ဆိုဖို့၊ ကုလားလို့လည်း မခေါ်ဖို့ O.I.C.ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားရမှာဖြစ်တယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမဖြစ်မှုကို လွှတ်တော်က ပြုတယ့်ဥပဒေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဘင်္ဂါလီအရေးထက် ဦးစားပေးရမယ့်အလုပ်ဟာ ကချင်ကိစ္စအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ ကိစ္စ၊ အတိုက်အခံများနဲ့ လက်တွဲပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကို အုတ်မြစ်ချဖို့ကိစ္စပါ။
From: သတင်း ဆောင်းပါး	← အာဖရိက ဇစ် မြစ်ကို စိန်ခေါ်နေသော မြန်မာ့အရိုးများ ( ၁ )
အာဏာရ ပါတီ ၏ ညီလာခံ ကျင်း ပနေ ချိန် တွင် နိုင်ငံ အနှံ ရှိ လူထောင်ပေါင်းများ စွာ က အစိုးရ ၏ OIC ရုံး ကို လက်ခံ ခြင်း ကို ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြ →
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,567,002 hits